गृहपृष्ठ » धर्म/संस्कृती » यो बर्षको नवरात्रि अति अशुभ, कुन-कुन राशिलाई पिरोल्छ
यस पटक नवरात्रि बिहीबारबाट सुरु भएको छ त्यसैले माता दुर्गा एक डोलीमा सवार आउनुहुनेछ। माता दुर्गाको हरेक वाहनको आफ्नै महत्व छ। शास्त्रहरुमा वर्णन छ कि जब माता दुर्गा एक डोलीमा सवार आउनुहुन्छ यसलाई शुभ मानिदैन । राजनीतिक उथलपुथलको स्थिति आउन सक्छ ।
यस वर्ष नवरात्रि मात्र आठ दिनको छ किनकि दुई तिथिहरु सँगै आउँछन्। एकै समयमा यस पटक मा दुर्गा कैलाशबाट एक डोलीमा सवार आउँदै हुनुहुन्छ । जस को बारे मा धेरै प्रश्नहरु घुमिरहेको छ। के नवरात्री को ८ दिनको शुभ छ ? के यस्तो योगमा दुर्गा माताको आशीर्वाद पाउन सकिन्छ ? त्यसो भए हामी तपाईलाई बताउँछौं कि कसरी शारदीय नवरात्रि सबै १२ राशिको लागि कस्तो छ ।
मेष : नवरात्रि मेष राशिका मानिसहरुको लागि शुभ हुनेछ। विवाह योग बनेको छ । स्वास्थ्यको दृष्टिले समय अनुकूल रहनेछ। तपाई रोगहरुबाट मुक्ति पाउनुहुनेछ। यस समय को बखत, लाभको सम्भावनाहरु छ । कान्छोलाई दाजुभाइहरुको सहयोग प्राप्त हुनेछ। रोजगारीको नयाँ बाटो खुल्नेछ।
वृष : यो समय वृष राशिका मानिसहरुको लागि मिश्रित रहनेछ। तपाई शत्रु माथि विजय प्राप्त गर्नुहुनेछ, तर बच्चा को पक्षबाट समस्या हुन सक्छ। जे होस्, यो समय स्वास्थ्यमा सुधार हुनेछ। यस समयमा खुशीको बलियो मौका र अचानक मौद्रिक लाभहरु को योग छ ।
मिथुन : मिथुन राशिका मानिसहरुलाई पदमा पदोन्नति र मौद्रिक लाभ प्राप्त हुने सम्भावना छ, यद्यपि यस समयमा तपाई तपाईको शत्रुहरुबाट सावधान रहन आवश्यक छ । उनीहरुको कारणले तपाई समस्याको सामना गर्न सक्नुहुन्छ। नवरात्रि को समयमा सम्पत्ति लाभ प्राप्त गर्ने एक बलियो सम्भावना छ।
कर्कट : नवरात्रि कर्कट राशिका मानिसहरुको लागि शुभ छ। खुशी, धन र समृद्धि वृद्धि को एक बलियो सम्भावना छ। जीवनमा तपाई आफ्नो काममा सफलता साथै सम्मान प्राप्त गर्नुहुनेछ। यस बाहेक तपाई जागिर वा विदेश बसोबासको राम्रो समाचार प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ।
सिंह : सिंह राशिका मानिसहरु दुर्गा माँ द्वारा आशिष् पाउनेछन्। आफ्नो मेहनतको उचित परिणाम प्राप्त गर्नुहुनेछ। केहि चीजहरुको बारेमा मानसिक चिन्ता हुन सक्छ। स्वास्थ्यमा सकारात्मक सुधार हुनेछ। मायालु मानिसहरुको जीवनमा मिठास हुनेछ र अविवाहित मानिसहरुको लागि विवाह सम्भव हुनेछ।
कन्या : कन्या राशिका मानिसहरुको लागि अचल सम्पत्तिबाट लाभ प्राप्त गर्ने सम्भावना छ। धन आर्जन हुने सम्भावना छ। यस अवधिको दौरान जीवनमा शुभ कार्यहरुको सम्भावनाहरु छन्। स्वास्थ्यमा सकारात्मक सुधार हुनेछ।
तुला : यस राशिका मानिसहरुको लागि यस नवरात्रिमा शुभ काम गर्ने सम्भावना छ। अनावश्यक चिन्ता, समस्या र बेचैनहरुबाट बच्नका लागि तपाईको ले प्रयास जारी राख्नुपर्नेछ । तपाई व्यावसायिक जीवनमा पदोन्नति प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ।
वृश्चिक : वृश्चिक राशिका मानिसहरु सावधान रहनु पर्छ। अनावश्यक खर्च हुने सम्भावना छ। कुनै कुराको बारेमा मानसिक चिन्ता रहनेछ। आयमा कमी देख्न सक्नुहुन्छ। परिवारका सदस्यहरुको विशेष ख्याल राख्नुहोस्, अन्यथा केहि चिन्ताजनक समाचार उनीहरुसँग सम्बन्धित प्राप्त गर्न सकिन्छ। यो राशिका मानिसहरु जो एक नयाँ व्यापार शुरू गर्न चाहानुहुन्छ उनीहरुका लागि अनुकूल छ।
धनु : यो नवरात्रि धनु राशिका मानिसहरुको लागि लाभदायक हुनेछ। जीवनमा शुभ कार्यहरुको प्रबल सम्भावना रहनेछ। व्यावसायिक व्यक्तिको आय बढ्नेछ। जे होस्, यी सबै को विपरीत, स्वास्थ्यको विशेष ख्याल राख्नका लागि सल्लाह दिइन्छ। पारिवारिक जीवन पनि शानदार रहनेछ।
मकर : मकर राशि भएकाहरुको लागि यो समय शुभ रहनेछ। सबै रोकिएका कामहरु पूरा हुनेछन् र विवाहको मार्गमा आउने सबै बाधाहरुलाई पनि हटाउने सम्भावना छ। नवरात्रिमा यस राशीको एकल मानिसहरुको लागि प्रेम प्राप्त गर्ने एक बलियो सम्भावना छ। शत्रु नष्ट हुनेछ र आर्थिक लाभ पनि पाउनुहुनेछ।
कुम्भ : राशि यो समय कुम्भ राशिका मानिसहरुका लागि भाग्य मा वृद्धि दिनेछ। सफलता मिल्नेछ साथै प्रगति र खुशी पनि आउनेछ। तपाईका साथीहरुलाई मद्दत प्राप्त हुनेछ र तपाईको सबै रोकिएको र अड्किएको काम पूरा हुनेछ। पेशागत जीवनमा राम्रो समाचार प्राप्त हुनेछ। समग्रमा यो समय तपाईका लागि अनुकूल रहनेछ।
मीन : मीन राशिका मानिसहरु सावधान रहनु पर्छ। ड्राइभ गर्दा सावधान रहनुहोस्। शत्रुहरु नष्ट हुनेछन्, तर जीवनमा केहि समस्याहरुलाई झेल्नुपर्ने हुन्छ । नोकरीमा धन आर्जन र पदोन्नतिको प्रबल सम्भावना छ।